OMG: Efa vita vaksiny aho ary tsy fantatro izay tao anatiny
Home » Lahatsoratra farany farany » People » OMG: Efa vita vaksiny aho ary tsy fantatro izay tao anatiny
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fahasalamana • People • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Inona no ao anatin'ny ibuprofen na fanafody hafa?
Inona no tao anatin'ny vaksiniko?
Miverina amin-kery tanteraka ny COVID-19. Ny ankamaroan'ny olona miafara amin'ny ICU na maty dia tsy vita vaksiny.
Ity lahatsoratra ity dia natokana ho an'izay rehetra mihevitra fa TSY AHY.
Efa vita vaksiny aho ary tsia, tsy fantatro izay ao anatiny — na amin'ity vaksiny ity na amin'ireo azoko fony aho zaza, na amin'ny Big Mac na hot dogs.
Tsy haiko koa izay ao anatin'ny ibuprofen na fanafody hafa fa manasitrana ny fanaintainako fotsiny izany.
Tsy haiko ny akora rehetra ao anaty savony, shampoo, na deodorant.
Tsy fantatro ny vokatra maharitra ateraky ny fampiasana finday.
Tsy fantatro raha nomanina tamin'ny tanana madio ny sakafo nohaniko tao amin'ny trano fisakafoanana.
Tsy haiko na tsy mahasalama ny akanjoko, ny lambako, ny zava-pisotro misy alikaola.
Betsaka ny zavatra tsy fantatro ary tsy ho fantatro mihitsy.
Saingy misy zavatra iray fantatro:
Fohy ny fiainana, tena fohy, ary mbola te hanao zavatra hafa ankoatra ny “hihidy” ao an-tranoko aho.
Mbola te hamihina olona tsy misy tahotra aho.
Fony aho mbola kely sy lehibe, dia natao vaksiny miady amin’ny lefakozatra sy aretina maro hafa aho. Natoky ny siansa izahay sy ny ray aman-dreniko, ary tsy voatery nijaly na nafindra na oviana na oviana tamin’ireo aretina nataoko vakisiny.
Isaky ny mitondra fiara aho dia ankiniko amin'ny olon-tsy fantatra an'arivony ny fiainako ary manantena aho fa hijanona eo anilany izy ireo.
Nandaitra nandritra ny fiainako izany hatreto!
Raha tsy misy fitokisana dia tsy misy fiainana mendrika hiainana ary tsy misy fitiavana!
Efa vita vaksiny aho.
Tsy vita vaksiny aho mba hampifaliana ny governemanta.
Natao vaksiny aho satria:
* Tsy te ho faty amin'ny Covid-19 aho.
* Tsy te hanaparitaka ny Covid-19 aho
* Te hamihina ny olon-tiako aho
* Mbola manao fitiliana ny tenako aho mba tsy hamindra Covid
* Tiako ny miaina ny fiainako.
* Tiako ny manao Covid-19 ho fahatsiarovana taloha.
* Te hiaro antsika aho.
* Tiako ny miaro izay tsy afaka, izany hoe ny zanatsika.
Atao vaksiny aho satria misy aretina lehibe hafa mety mila fitsaboana any amin'ny sampana fitsaboana marary, toy ny
loza, aretim-po, homamiadana
Efa vita vaksiny aho satria tiako ny mandehandeha sy mikaroka an'izao tontolo izao!
Avy amintsika rehetra ao amin'ny eTurboNews ary ny World Tourism Network!
Manaova vaksiny azafady!